Mavhesi eBhaibheri Pane Zvepamusoro: Upombwe -> Zvivi
Sianayi noupombwe. Zvimwe zvitadzo zvose zvinoitwa nomunhu zviri kunze komuviri asi munhu anoita zvoupombwe anotadzira muviri wake.
Kuwanana ngakuremekedzwe pakati pavanhu vose uye bonde ravawanani ngarirege kusvibiswa nokuti Mwari achatonga pfambi navanoita upombwe.
Munhu anoziva zvinofanira kuitwa zvakarurama, asi asingazviiti, kwaari chitadzo.
Ndakaona zvinhu zvako zvandisingade, uye unzenza hwako nokuhwihwidzira somukono webhiza noufeve hwako hwakafumuka pazvikomo musango'mu. Zvichakuwana Jerusaremu! Kusvikira riniko wakangodai kun'ora.
Tikareurura zvitadzo zvedu iye anotendeka uye akarurama, anotiregerera zvitadzo zvedu achitichenesa kuunyangadzi hwose.
Ani naani anoramba mukadzi wake achiroora mumwe anoita upombwe. Nouyowo anoroora mukadzi akarambwa nomurume wake anoita upombwe.
Munhu anoita upombwe haana njere, anoita zvakadai kuzviuraya
 Saizvozvo mukadzi akaroorwa unosungwa nomutemo wokuva akabatana nomurume wake panenge murume wake achiri mupenyu. Asi murume wake akafa atosunungurwa pamutemo kune zvomurume wake. Saizvozvo anonzi chifeve chomukadzi kana akagara nomumwe murume, murume wake achiri mupenyu. Asi murume wake akafa asunungurwa pamutemo iwoyo. Kana akaroorwa nomumwe murume haachisiri chifeve.
 Akati kwavari, “Ani naani anoramba mukadzi wake achiroora mumwe, anoita upombwe uye achimutadzira. Mukadziwo akaramba murume wake achitorana nomumwe murume anoita upombwe.”
 “Makanzwa kuti zvakanzi, musaite upombwe Asi ini ndinoti kwamuri, ‘Ani naani anotarisa mukadzi achimuchiva atoita upombwe naye mumwoyo make.’ Kana ziso rako rorudyi richikukonzera kutadza risvukunure urikande kwakadaro. Zviri nani kurasikirwa neimwe nhengo yomuviri wako panze pokuti muviri wako wose ukandwe mugomba romoto. Kana ruoko rwako rworudyi ruchikukonzera kutadza rudimbure urwukande kwakadaro. Zviri nani kurasikirwa neimwe yenhengo dzako panze pokuti muviri wako wose uende kugomba remoto. “Zvakanziwo uyo anoramba mukadzi wake ngaamupe tsamba yegupuro. Asi ini ndinoti, ‘Ani naani anoramba mudzimai wake kunze kokunge chikonzero chacho chiri choupombwe, anomuita kuti aite upombwe. Ani naaniwo anoroora mukadzi akarambwa anoita upombwe.’
1 VaKorinte 6:9-16
 Hamuzivisu kuti vasakarurama havawane nhaka youmambo hwaMwari. Musazvinyengedze kuti hapana unzenza navanamati vezvisiri Mwari, kana mhombwe navarume vanoita zvakaipa navamwe varume, kana mbavha, kana vano ruchiva, kana zvidhakwa kana vanyombi kana makororo vanokwanisa kupinda muumambo hwaMwari. Ndizvo zvakanga zvakaitawo vamwe venyu asi makashambidzwa mukaitwa vatsvene, mukaruramiswa muzita raTenzi Jesu Kristu uye muna Mweya waMwari wedu. Hongu ndinobvumirwa zvinhu zvose asi hazvisi zvose zvinobatsira Hongu ndinobvumirwa zvinhu zvose asi handibvumi kuitwa muranda nechii zvacho. Chokudya chakaitirwa dumbu dumbu rakaitirwa chokudya. Asi Mwari achazviparadza zvose zviri zviviri Muviri hausi wounzenza asi ndowaTenzi, Tenziwo ndewe muviri Mwari akamutsa Tenzi uye achatimutsawo nesimba rake. Hamuzivi here kuti miviri yenyu inhengo dzaKristu? Zvino ndingatore here nhengo dzomuviri waKristu ndichidziita nhengo dzomuviri wepfambi? Hazvimbofa zvakaitika. Hamuzivi here kuti munhu anozvibatanidza nepfambi anobva ava muviri mumwechete nepfambi? Sokunyorwa kwazvakaitwa zvichinzi, “Vaviri ivavo vachava nyama imwechete.”
 Mumwe mutongi akabvunza Jesu achiti, “Mudzidzisi wakanaka. Ndingaitei kuti ndiwane upenyu husingaperi?” Jesu akati kwaari, “Sei uchinditi ndakanaka? Hakuna wakanaka asi Mwari woga. Inga unoziva wani mitemo, inoti usaite upombwe, usauraye, usabe, usaite uchapupu hwenhema remekedza baba naamai vako.”
1 VaTesaronika 4:3-5
 Izvi ndizvo zvinoda Mwari zvokuti imi muve vatsvene musiane noupombwe. Mumwe nomumwe wenyu ngaazive kuchengeta muviri wake muutsvene nomukuuremekedza kwete nehavi dzomuviri dzoruchiva sezvinoita vechirudzi vasingazivi Mwari
 Ipapo akati, “Zvinobuda mumunhu ndizvo zvinomun'oresa. Nokuti imomo mumwoyo yavanhu, ndimo munobva pfungwa dzakaipa, nounzenza, nokuba, nokuuraya, noupombwe, noruchiva nomwoyo wakaipa, nounyengedzi nokusazvibata, neshanje, nokushonha Mwari nokuzvikudza noupenzi. Zvakaipa zvose izvi zvinobva mukati, uye zvinon'oresa munhu.”
 Hamuoni here kuti chinhu chose chinopinda mukanwa chinopfuura nomudumbu chichizobva chorasirwa kunze. Asi chinobuda mukanwa momunhu chinobva mumwoyo, ndicho chinon'oresa munhu. Nokuti mumwoyo ndimo munobva pfungwa dzakaipa dzinoti, umhondi noupombwe nokufeva nokuba nokurevera vamwe nhema uye kutaura zvakaipa nezvavamwe. Izvi ndizvo zvinon'oresa munhu asi zvokudya usina kushamba maoko hazvin'orese munhu.”
 Rega kasipiti kako kakomborerwe ufadzwe nomukadzi wapahudiki hwako sesheshe yemhembwe kunaka, senhunzvi yengururu yakanakisa kukuda kwake ngakukuzadze nokufara ugutsikane nguva dzose norudo rwake. Sei uchibatwa mwoyo mwanangu, nomukadzi asiwako uchimbundira chipfuva chepfambi? Chiripo ndechokuti Tenzi anoona zviito zvomunhu anotarisa nzira dzake dzose. Munhu anoteewa nouipi hwake anobatwa mubasa rake iroro rechitadzo. Anofa pamusana pekutadza kuzvibata uye anorasika pamusana poupenzi hwake hukuru.
 “Mudzidzisi mukadzi uyu abatwa ari mukuita upombwe. Zvino muMutemo, Mosesi akati tinofanira kutaka namabwe munhu akadai. Zvino imi munoti kudii naye?” Izvi vakataura vachida kuti vamunzwe kuitira kuti vawane mhosva yokumupa. Jesu akakotama akanyora pasi nomunwe wake. Pavakaramba vachingomubvunza akati twasu kumira ndokuti kwavari, “Uyo asina chitadzo pakati penyu ngaatange kumukanda dombo.” Ndokukotamazve onyora pasi nomunwe wake. Pavakazvinzwa vakaita rumwerumwe kubuda kuchitanga navakuru vacho. Jesu akasiiwa angova oga nomukadzi uya amire pamberi pake. Jesu akasimudza musoro akati kwaari, “Nhai mudzimai iwe vari kupi vaya? Hakuna neakupa mhosva here?” Iye akati, “Hapana changamire.” Jesu akati, “Kana neniwo handikupi mhosva chienda hako usazotadzazve.”
 Mwanangu chengeta mitemo yababa vako, usakande pasi mirao yaamai vako isungirire mumwoyo mako isungirire muhuro mako nguva dzose. Kana wofamba inokutungamirira, kana worara inokuchengetedza. Kana wakasvinura inokurukura newe. Chandinodariro ndechokuti mutemo mwenje, murao chiedza kutsiurwa nokudzidziswa ndiwo mafambiro ohupenyu kuitira kuti zvikudzivirire kumukadzi wakaipa kururimi rwunotapira rwomukadzi pfambi. Usatorwe mwoyo norunako rwake usabatwe kumeso netsiye dzake. Nokuti pfambi inogona kutengwa nemari yechingwa asi mukadzi womumwe anonanga zvokutora upenyu hwakakosha hwomunhu. Munhu angatakure moto pachipfuva, hanzu dzake dzikarega kutsva here? Kana kuti munhu angafambe pamavhunze anopisa, tsoka dzake dzikarega kutsva here? Ndizvo zvakaita munhu anoenda kumukadzi womumwe hakuna anomubata bata akarega kurangwa. Handiti vanhu vanoshora mbavha here inenge yaba kuti irape nzara yayo? Asi ikabatwa inoripiswa kakapetwa kanomwe inobvisa upfumi hwose hwomumusha mayo. Munhu anoita upombwe haana njere, anoita zvakadai kuzviuraya chaanowana ipapa maronda nokushorwa uye kuzvidzwa kwako hakufe kwakabva nokuti shanje inoitisa munhu hasha, kana wotsividza anotsividza zvisina tsitsi zvokuti pakaripwa haambozviona kana kugadzana mwoyo nokumupa kwako zvipo zvakawanda.
 Miromo yomukadzi asiwako inodonha uchi zvaanotaura zvinotsvedzerera kupinda mafuta asi pokupedzisira anokarakata segavakava akapinza sebakatwa rinocheka kose. Tsoka dzake dzinoenda kurufu nhanho dzake kuvafi ndiko kwadzo. Haambofungi nezvenzira inoeda kuupenyu, nzira dzake dzinopota-pota asi haazvizivi. Zvino vanangu ndinzwei musasiane namazwi omuromo wangu tambira kure naye usambosvika zvako pedyo nomusuo wemba yake. Ungadaro ukapa rukudzo rwako kunavamwe uye makore ako kuna vasina tsitsi vamwewo vanhu vangadaro vakutorera upfumi hwako zvawakashandira zvikaenda kumutorwa. Pakupedzisisa poupenyu hwako unozowuwura nyama yako nomuviri zvadyiwa zvino wavakuti, “Chandakarambirawo zvangu kudzorwa chiiko, mwoyo wangu uchishora kutsiurwa. Ndairamba kuteerera zvaitaurwa navarairidzi vangu kana kurerekera nzeve yangu kuvadzidzisi vangu. Ndakanga ndasvika pokutoparara zvachose mukati megungano rakaungana.” Inwa mvura inobva mumugodhi wako mvura inoerera inobva mutsime rako. Zvisipiti zvako zvongoyerera nenyika here mihoronga yemvura yako iyerere mumigwagwa zvayo here? Ngaive yako yoga kwete yevatorwa vaunavo. Rega kasipiti kako kakomborerwe ufadzwe nomukadzi wapahudiki hwako sesheshe yemhembwe kunaka, senhunzvi yengururu yakanakisa kukuda kwake ngakukuzadze nokufara ugutsikane nguva dzose norudo rwake. Sei uchibatwa mwoyo mwanangu, nomukadzi asiwako uchimbundira chipfuva chepfambi? Chiripo ndechokuti Tenzi anoona zviito zvomunhu anotarisa nzira dzake dzose. Munhu anoteewa nouipi hwake anobatwa mubasa rake iroro rechitadzo.
1 VaKorinte 7:1-40
 Panyaya dzamakanyora, zvakanaka kuti murume arege zvake kumbobata munhukadzi. Asi pamusana peupombwe huriko, murume oga oga anofanira kuva nomukadzi wake uyewo mukadzi mumwe nomumwe anofanira kuva nomurume wake. Murume anofanira kupa mukadzi wake zvaanofanira kumupa somurume wake, ndizvozvowo nomukadzi kumurume wake. Mukadzi haana simba pamusoro pomuviri wake asi murume wake; murumewo haana simba pamusoro pomuviri wake asi mukadzi wake. Regai kunyimana, kunze kokunge mabvumirana kuregera kwechinguva, kuti mumbonamata, asi mozodzokerana zvakare nokuti Satani angadaro akakuedzai nokutadza kuzvibata. Handisi kutaura izvi kwamuri somutemo asi kukubairai zanhi. Ini ndingatoda kuti dai vanhu vose vakaita zvandakaita ini. Zvakadaro zvazvo, vanhu vose vakapiwa zvipo zvakasiyana — siyana, munhu nomunhu achipiwa naMwari chipo chisina vamwe. Kuna vasina kuroora nechirikadzi, ndinoti zviri nani kwavari kuramba vasina kuwana sezvandiri. Asi kana vasingakwanisi kuzvibata ngavawane nokuti zvirinani kuwana pano kutsva nehavi. Kuna vakaroorana ndinopa murawo, kwete ini asi Tenzi, wokuti mudzimai haafaniri kusiyana nomurume wake. Asi akasiyana naye ngaarambe asina murume, kana kuti ngaadzokerane nomurume wake. Murumewo ngaarege kuramba mukadzi wake. Kuna vamwe imi mose, ini, kwete Tenzi, ndinoti kana hama munamati ino mudzimai asiri mutendi asi anobvuma zvake kugara naye, haafaniri kumuramba. Mudzimaiwo, kana aine murume asiri mutendi anobvuma zvake kugara naye haafaniri kumuramba. Chikonzero chacho ndechokuti murume asingatendi anoitwa mutsvene pamusana pomukadzi wake uyewo mukadzi asingatendi anoitwa mutsvene pamusana pomurume wake. Dai zvisina kudaro vana venyu vangadai vakan'ora asi sezvazviri, vatsvene. Asi kana uyo asingatendi achida kuti vasiyane, ngavasiyane. Pakadaro hama munamati yakasununguka nokuti Mwari akatidanira rugare. Iwe mudzimai ungazive sei kuti zvimwe uchaponesa murume wako? Newewo murume ungazive sei kuti zvimwe uchaponesa mudzimai wako? Chiripo zvacho ndechokuti munhu wose ngaagare upenyu hwaakapiwa naTenzi uye hwaakadaidzirwa naMwari. Iwoyo ndiwo mutemo wangu mumasangano ose. Pano munhu akanga akadzingiswa here panguva yaakadaidzwa? Ngaarege kuvanziridza kudzingiswa kwake. Pana akanga asina kudzingiswa here panguva yaakadaidzwa? Ngaarege kudzingiswa. Kudzingiswa kana kusadzingiswa hakuna zvakunoreva asi kuchengeta mitemo yaMwari. Munhu wose ngaarambe ari zvaakanga ari paakadaidzwa. Wakanga uri muranda here pawakadanwa, hazvina mhosva, asi kana uchigona kuwana rusununguko rwako chawawana batisisa, zvisunungure. Chiripo ndechokuti muranda anenge adaidzwa muna Tenzi, munhu akasununguka waTenzi. Ndizvozvowo nomunhu akadanwa iye akasununguka, muranda waKristu. Imi makatengwa nomutengo, musave varanda vavanhu. Naizvozvo hama dzangu munhu zvaakadaidzwa naMwari akaita, ngaarambe akaita saizvozvo. Kuna vasina kuwana handina mutemo waTenzi asi ndinokupai zvandinofunga somunhu anovimbika chiri chipo chenyasha dzaTenzi. Ndinofunga kuti nenhamo dziriko iye zvino, zviri nani kuti munhu arambe ari zvaari. Wakabatanidzwa nomukadzi here? Usatsvake kusunungurwa. Hauna kuwanana nomukadzi here, usatsvake zvokuwana. Asi ukawana hauna kupara chitadzo. Musikanawo akawanikwa haana kupara chitadzo. Asi vanoroorana, nhamo dzapasi dzoupenyu ndedzavo. Ndingade kuti ndikudzivirirei kunhamo dzakadaro. Zvandinoreva ndezvizvi, hama dzangu, nguva yakatemwa iya yava pedyo pedyo. Kubvira iye zvino zvichienda mberi vana vadzimai ngavagare savasina. Uye vaya vanochema ngavaite savasiri kuchema. Vanofarawo ngavaite sevasiri kufara. Uye vanotenga ngavaite savasina zvinhu. Vane zvokuita nezvenyika ngavaite savasinei nezvenyika nokuti nyika sezvairi iri kupfuura. Ndingade kuti pasave nechinokushungurudzai mumwoyo. Murume asina kuroora ane shungu nezvaTenzi kuti angafadze Tenzi sei. Asi murume akaroora mwoyo wake uri kune zvapanyika kuti angafadze mudzimai wake sei. Munhu ane mwoyo miviri. Mukadzi asina kuroorwa kana kuti mhandara, ano shungu nezvaTenzi kuti ave mutsvene mumuviri nomumweya. Asi mukadzi akaroorwa mwoyo wake uri kune zvenyika kuti angafadze sei murume wake. Ndinotaura izvi kuti ndikubatsirei, kwete kuti ndiwane chandinokurambidzai asi kuti pave nokuita kune mwero uye kuti muve nomwoyo mumwechete kuna Tenzi. Kana murume achiona kuti haasikuzvibata kumusikana wake. Kana havi dzake dzanyanya uye pane zvinofanira kuitwa ngaaite zvaari kuda kuita, ngaaroore. Hapana chakaipa. Asi munhu akanyatsofunga mumwoyo make kurega kuroora asina amumanikidza achinyatsoziva zvaari kuita, anyatsozvironga mumwoyo make kusaroora musikana wake, anoita zvakanaka. Naizvozvo munhu anoroora musikana wake anoita zvakanaka uyewo munhu asingaroori anotoita zviri nani. Kana murume achiri mupenyu mudzimai anosungwa nomurawo wokuramba akabatana nomurume wake, asi murume wake akafa, akasununguka kuroorwa nomurume waanoda asi ngazviitwe muna Tenzi. Asi sokuona kwangu angatova munhu akakomborerwa zvake akaramba ari zvaari izvozvo. Ndinofunga kuti ndina Mweya waMwari.